SpaceShields® usoro nkenke ikuku ntụ oyi na-enye nchekwa, ntụkwasị obi, ike na-arụ ọrụ nke ọma, gburugburu ebe obibi na ngwọta jụrụ oyi maka nnukwu ọnụ ụlọ kọmputa ma na-enye ebe kachasị mma gụnyere okpomọkụ, iru mmiri na ịdị ọcha, wdg na akụrụngwa ma hụ na ọ kwụsiri ike. arụ ọrụ nke akụrụngwa maka 365days * 24hours.
Usoro RowShields® InRow ikuku ntụ oyi dị nso na-ajụkwa kabinet ihe nkesa. Ọ na-enye ngwọta dị jụụ, ntụkwasị obi, dị elu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ebe nchekwa data njupụta dị elu nke modularized maka ọrụ okpomọkụ, iru mmiri na njikwa ịdị ọcha.
Ngalaba kwadoro ụgbọ ala maka friji
BlackSheilds VcoolingShields usoro refrigeration nkeji ka emebere dị ka ihe ngwọta na-achịkwa ihu igwe maka ngwa agha yinye oyi. A na-etinye akụkụ ndị ahụ n'enweghị nsogbu na ntụkwasị obi maka ụgbọ njem ụgbọ njem dị arọ / ọkara / ọkụ ọkụ nwere njirimara dị elu, ntụkwasị obi dị elu, obere nha, ngwa ngwa ngwa ngwa wdg.
Igwe ikuku AC maka kabinet ụlọ ọrụ n'èzí
BlackShields AC-P series Air conditioner emebere maka ịchịkwa ihu igwe nke kabinet ike na ebe nchekwa na gburugburu ime ụlọ na n'èzí siri ike. Site na nnukwu ikuku ikuku na ogologo anya maka ikuku ikuku, ọ na-edozi nsogbu okpomọkụ & iru mmiri nke ime ụlọ / n'èzí ma bụrụ ezigbo nhọrọ maka ngwa telecom.
Igwe ntụ oyi AC maka kabinet ụlọ ọrụ ime ụlọ
BlackShields AC-L series Air conditioner bụ ihe ngwọta dị jụụ nke ụlọ ọrụ nke a na-etinye n'akụkụ nke ụlọ elu dị elu na nke dị warara na nkesa na-enweghị isi na vetikal nke okpomọkụ na gburugburu ime ụlọ na-ama aka. Ọ na-edozi nsogbu okpomọkụ na nrụnye nke kabinet dị iche iche nke ọma.